Njani ukwenza Umfazi ngothando kwaye Addicted: enzima unstoppable - IVIDIYO INCOKO - Uthando-intanethi!
Njani ukwenza Umfazi ngothando kwaye Addicted: enzima unstoppable
Ezine) kukho into kuwe anayithathela sele dreaming
U-ezintandathu imibuzo ukuba bazimanye uthando, luhlaza okanye inyaniso."Oku akunjalo enobunzima, uthando ngqo, kukho uluhlu ezintathu isithandathu imibuzo ukuba seduce enye."Amandla amazwi ingaba ngenene ngcono kunoko bomzimbaSonke ufuna ukuba abe seduced, sonke ufuna ukuba ngenye imini, omnye umntu attaches kuthi, ukuba kubekho inkqubela ziphantsi ngothando kunye nathi. Ungaya ukufunda kwi media oku uluhlu amathathu anesithandathu imibuzo ukuze kuwa ngothando. Luhlaza okanye inyaniso, kwaba kugqitywe ukuba decipher olu luhlu. Sebenzisa kunye kakuhle. Kwi-nzulu ihlole lisebe i-american psychologist Aph Aron lugqiba ukuba aphande ndinovelwano ka-vulnerability. Kude ke"mysterious", ebizakuba ukufihla inxalenye yethu iinyaniso kwaye gestures, oku uluhlu amathathu anesithandathu imibuzo ivula ucango lwakho amaphupha, yakho elidlulileyo, yakho unconscious kwaye ikuvumela ukunikezela ngendlela subtle hlobo. Intimate Confessions: xa mna isitulo ye-oral igalelo kwi izikolo zoshishino, ndenza kofakwano sebenzisa olu luhlu ukuya"search"candidates, destabilize nicely. Ngexesha i-oral, lonke ihlabathi soloko kakuhle-ezilungiselelwe, sisoloko kuba zethu iimpendulo ilungile, ngolohlobo ngexesha umsebenzi enze udliwano-ndlebe: siyayazi into kufuneka sibe ndithi, siyazi into ke sele ukuthi ukwenza okulungileyo impression. Ukumbule oku uluhlu amathathu anesithandathu imibuzo ukuze kuwa ngothando.
Xa usenza zama name kwi-ngokuhlwa umzekelo, anditsho isiqinisekiso ukuba uya kuwa ngothando okanye ukuba kubekho inkqubela kwi-phambili kufuneka ifuna absolutely ukuba ubudlelwane kunye nawe, kodwa enye into kuba uqinisekile: uya ndafunda elikhulu yaba malunga nawe kwaye malunga nezinye.
Kwi-yoqobo amava, wafumana wongeza nangakumbi yangasese iinyanga ezintathu isithandathu imibuzo, ecela-nxaxheba ukuqwalasela ezine lemizuzu cwaka kwaye kokuba uqhagamshelane. Musa neglect amandla gaze, ayo ubunzulu xa ufuna ukusebenza kule game ezintathu-ezintandathu imibuzo. Ukuba wena yiya kwi yokuqala umhla-kwenu, wamkelekile nentombi (ewe, ufuna ozayo) kwaye kunikela kuye a rendezvous yoqobo, ngokungathi sele mhlawumbi zange waphila. Zichaza kuye ukuba kuba kanye, kufuneka kugqitywe ukulungisa oku umhla njengoko umsebenzi udliwano-ndlebe buza uthotho imibuzo, abanye ngakumbi intimate ngaphezu kwabanye. Ungakhetha noba propose kuye ukuba ukuphendula lokuqala (inqanaba: East), ukuba uphendula ngomhla wokuqala kwaye ke emva (inqanaba: medium), mhlawumbi uthi nto kwaye ngumsebenzi omnye kuphela ukuphendula ezintathu isithandathu imibuzo kuba oku kuqala UKUQESHWA (inqanaba: nzima). Ibhonasi: nzima inqanaba inika sele isizathu sesibini idinga, apho uza ukuphendula, ekugqibeleni, ezi amathathu anesithandathu imibuzo, kubalulekile ngenxa yesi sizathu ukuba izakuba zethu preference. Musa xana ukuba ukubeka kubekho inkqubela kwi-phambili kufuneka kwi-trust, ngenye indlela, sibe ngokukhawuleza jonga njenge udliwanondlebe Raphael Mezrahi. Phambi kwenu nokuchaza uluhlu amathathu anesithandathu imibuzo, kwaye uxoxe yayo ukusebenza, khangela ngaphandle oku famous uluhlu, nto leyo umahlule kwi ezintathu imimandla. Qaphela ukuba younger okanye ngaphezulu addicted ukuba loluntu networks: kwetyala, oku uluhlu amathathu anesithandathu imiba, ke kancinci ngoluhlobo Buza.fm, kodwa yokwenene ebomini, intloko intloko, kunye emlonyeni.
Apha kuyo, lento famous uluhlu.
Xa ukhethe ukufunda imibuzo, mna ekhethiweyo ezintlanu ukuze zichaza zabo ukusebenza. Ezintandathu) Ukuba ungakwazi kuphila ukuya kwi-alithoba eminyaka, kwaye nokuzigcina noba engqondweni okanye umzimba womntu engamashumi amathathu ananye unyaka-endala kuba yokugqibela amathandathu eminyaka ubomi bakho, yintoni ingaba ukhetha. A) Ukuba ungakwazi tshintsha enye into ngendlela apho kuwe baba educated, ukutsho oko kuya kubanjalo. Unum) Thatha ezine imizuzu ukuya kuxelela ubomi bakho ukuba umlingane wakho kunye njengoko iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Unieux) Ukuba ungakwazi wake up namhlanje ekubeni wazuza omnye umgangatho okanye ubuchule, yintoni ingaba ibe. A ezintathu) Ukuba ikhristali ibhola ayikwazi ndinixelele inyaniso malunga nani, ubomi bakho, kwixesha elizayo, okanye nantoni na, ngubani ungathanda ukwazi. UNEF -) Ukuba ngaba wayesazi kuwe baba oza kufa ngesiquphe ngonyaka, ingaba ufuna ukutshintsha into ebomini bakho-isimbo. U-u) share kunye umlingane wakho into kuwe cinga dibanisa uphawu kuye. Share anesihlanu ewonke. Isibini kuso kathathu) Ngexesha apho incopho usapho lwakho ingaba solid kwaye eshushu. Ucinga ukuba yakho lwabantwana abancinane waba happier kunokuba abantu abaninzi. Amabini anesihlanu) Chaza ukuba wonke umntu ezintathu neenyaniso ekuqalekeni kunye elithi"thina". Umzekelo:"Sibe kunye kweli gumbi"amabini anesixhenxe) Ukuba ngaba ayeza kuba vala ukuba umlingane wakho, umxelele okanye kwayo oko kuya kuba kubalulekile ukuba lowo okanye yena uyayazi kuyo.
Deuxhuit) Chaza ukuba umlingane wakho into ungathanda kuye.
Ukuba abe kakhulu honest kwaye ndithi zinto ukuze nibe wouldn khange ndithi ukuba umntu ufuna nje kuhlangatyezwana nazo. Ezintathu) Ukuba ngaba ayeza kufa le ngokuhlwa ngaphandle ekubeni ithuba zithungelana kunye nabani na, ukuba regretteriez kuwe kakhulu hayi ndithe.
Kutheni ungavumeli i kuba wathi, phezulu ngoku.
Ezintathu -ezine) ikhaya Lakho, oko iqulathe yonke into kuwe obubobakhe, catches umlilo. Emva ugcina usapho lwakho, kwaye yakho pets, kufuneka ixesha ngokukhuselekileyo ukubuyiselwa enye into. Yintoni ingaba ibe. Amathathu anesithandathu) Share a personal ingxaki kwaye ucele umlingane wakho indlela ebeya ukulawula. Kanjalo, cela iqabane lakho ukuba kukuxelela indlela yena thinks uziva ngokumayela le ngxaki. Intimacy: kubalulekile umlawuli ilizwi olu luhlu ukuba kakhulu lobuqu. Bonke girls ingaba ezingayi ukudlala umdlalo: abanye ngabo hayi komhlaba ngokwaneleyo, abanye hayi iselwa adventurous kwi umphefumlo, abanye baya kufumana imibuzo kakhulu risqué kuba kuqala umhla. Ngo discovering uluhlu ezintathu isithandathu imibuzo, wena kwafuneka kukuxelela kanjalo okokuba kuba eminye imibuzo, kufuneka akukho mpendulo. Wam wokuqala ingcebiso seduction: lean seriously kuyo yonke imibuzo yakho, bamele kubalulekile ebomini bakho, ukuchaza ukuba yintoni i-nabafana umntu."Ndiyazi ngokwakho", asikholwa tshintsha umbuzo abo uphumelele.
A) Ukuba ungakwazi tshintsha enye into ngendlela apho kuwe baba educated, ukutsho oko kuya kubanjalo.
Unieux) Ukuba ungakwazi wake up namhlanje ekubeni wazuza omnye umgangatho okanye ubuchule, yintoni ingaba ibe. Ezintathu -ezine) ikhaya Lakho, oko iqulathe yonke into kuwe obubobakhe, catches umlilo. Emva ugcina usapho lwakho, kwaye yakho pets, kufuneka ixesha ngokukhuselekileyo ukubuyiselwa enye into. Yintoni ingaba ibe.
Kutheni ukhe hayi bamthwala ngaphandle
Wokuqala ivumela kuthi ukuthetha ye-conception ka-impumelelo kwaye ulonwabo.
Kubaluleke kakhulu ukuba uyazi yintoni impumelelo kuba umfazi. Ingaba unengxaki efanayo imibono, onjalo neminqweno. (Oko overlaps kancinci kunye umbuzo kwi celebrity) yesibini umbuzo ikuvumela ukuskena i-complex, imfundo kwaye usapho ikhonkco. Kunjalo, kukho eminye imibuzo malunga nosapho lwakhe, kodwa iyakuvumela ukuba ngqo okujoliswe kuko nje. E-intliziyo intimacy, umbuzo kakhulu zinamandla. Lwesithathu umbuzo unako ukuhlaziya yangaphakathi contradictions umntu. Ngokuqhelekileyo, ukuba ndino ukuphendula, ndingathi"Kuba indima yam, ndibe nento yokuba ngathi ukufumana phezulu kwaye mfundisi - unguye ka-photography, okanye ndibe nento yokuba ngathi ukufumana phezulu kwaye ukufunda ukudlala i-piano."Impendulo ye-kubekho inkqubela fuserait:"Kodwa uyakwazi ukufunda, yintoni wena khusela."BIM. Nto ngakumbi ukuphendula:"kakhulu lazy, akukho xesha, nzima kakhulu, nokungabikho isibindi, kulungile, kulungile oku asikuko ngoko ke kubalulekile kuba nam."Kubalulekile umbuzo njani thina ukulinganisa determination yomntu kunye negqiza amandla uphawu.
Ngowesine umbuzo uthetha ezimbini kuni.
Kutheni ukuba uyabona. Ngexesha lakho elizayo free ixesha kunye, oko kwenza uceba ukuba ungabelana ngantoni. Lo mbuzo ikuvumela ukuba kugxila okulindelweyo ngamnye omnye. Mna ingakumbi njenge yokugqibela umbuzo,"umbuzo omlilo."Yonke into burns, kwaye uyakwazi ukugcina i-object. Lo mbuzo uyaya ukuba kuyimfuneko. Kuyinto amakhonkco injongo, kuyinto ezixabisekileyo wolwazi. Yeyiphi kwaye kutheni. Apha, mna kufuneka sivumo kuwe ukuba ndiza kuba embarrassed ukuba ndino ukuphendula lo mbuzo, ndinezinto ezininzi izinto ukuze ube nomdla kakhulu yeemvakalelo zakho ngaphandle kwentlawulo, kwaye yokulahla nabo okanye france kwabo kuyenza kum mhlawumbi kancinci ezibuhlungu. Kanjalo ngokuphonononga ukulinganisa iqondo futility ka-superficiality le kubekho inkqubela kwi-phambili kuwe. Namhlanje ke basebenzise: khetha imibuzo emithathu ukususela uluhlu amathathu anesithandathu imibuzo ukuba bazimanye uthando, kwaye zichaza kuthi KUTHENI kufuneka esikhethiweyo ezi imiba ethile. Kwi-i-bume apho yonke into taboo, mna bakhetha educate ulutsha ukunqanda ngayo bangaweli iimpazamo experienced yi-us. Enkosi kakhulu ngoko ke kuba la manqaku. Kukho kubekho inkqubela ukuba mna dredged ngo-oktobha, kodwa yena saliwe kum. Ndicinga ukuba kungenxa ndaye Pa nako ukuthetha kakuhle.Ndinguye kakhulu ngothando kunye naye. Mna musa ukushiya ngaphezulu kwi-classroom kwaye wena kuphela bayibone e a umgama. Kutheni okokuba mna? kuba nethuba ukuba seduce yakhe. Kwaye njani ingaba ndiya malunga nayo. Ndandicinga yena wayemthanda kum kodwa yena wathi akukho yena prefers, sihlangulwe kwakhona umhlobo Kum wam ingxaki kukuba Kukho kubekho inkqubela okokuba ndinguye kakhulu ngothando kunye yakhe kodwa xa ndifuna ukuthetha malunga nayo, yena ingu pretending hayi kuba anomdla. Ngoko andixelele ukuba yintoni ekufuneka uyenze. Kungcono ukuba ufuna vertical, i-ukuqeshwa ngoko ke kubalulekile ukwazi ukuba nive into kufuneka ndithi kuye quietly.
Kungcono kuba uyakwazi ukucwangcisa izikhundla njengoko abahlobo baza kuthabatha ithuba sivumo zonke uziva kuba nabo.
Uyazi mna ndithanda wam boss - (a chef) kodwa ke yenza kum bonke xa ndidinga imali ezinye imali yena unika ngayo kum nge-bam iingxaki ukuba yena rhoqo ilindele efanayo yena weeps ngexesha lam ndawo kodwa mna efana nayo kakhulu, kwaye nje kutsha nje yena wokuqhawula umtshato kunye umyeni ngumsebenzi wam superior, yena ngu ibakala njani mna bonisa kuye ukuba mna ndiyamthanda yena ngu wakhe fifties kwaye nam i-quarantine Molo.
Kum wam ingxaki ndinguye ngothando kunye kubekho inkqubela kwaye ndiyazi kanjalo, ingaba yintoni esenza phinda-phinda kathathu ukuba yena hesitates ukuba uthi ewe. Kodwa ingxaki kukuba xa ndixelela kuye ukumisa ukubona yena akuthethi ukuba ufuna. Akekho kuba isibindi ukuba uthi ewe. Xa sisebenzisa ubuso ngobuso ngayo andixelele ukuba yintoni gonna ukuphendula kum kodwa yena hesitates. Ndandisazi ngakumbi yintoni Eminye imibuzo ndithanda kakhulu, kodwa k ubonakala ngathi kum? kakhulu intimate kuba kuqala IDINGA. Ngenxa ukuba kufuneka mna-impendulo, ibe kukho imfuneko disclose zethu iziphene, bethu icala ezixabisekileyo. Kwaye lento precisely ntoni thina kumele kuphetshwe kuba kuqala okanye kwa yesibini IDINGA. Kubalulekile kakhulu phambi kwexesha. Kubalulekile ngokuqinisekileyo, kuyimfuneko ukuba buza imibuzo efana nale ukuba ngenene get ukwazi kubekho inkqubela kwi-phambili kwethu, khangela ngaphandle zethu uthelekiso, kodwa sidinga ukuphepha revealing zethu insecurities, oku asiyo ixesha. Ngoko ke ndiyacinga ukuba ibe meko-umlomo ukuba uqhagamshelane. Oko akufanele kakhulu kakhulu ukunika kwayo yonke ngosuku. Kwaye ndicinga ukuba oko unako ukunika a ngxoxo kakhulu ezinzima, ngaphandle kokuba ingaba kulungile siyazi ukuba jula ugange izinti phezulu kunye ezahlukeneyo kubhalisa. Ewe, ndicinga ukuba kufuneka ingabi yoqhubekeko-magama kwabo bonke, ngolohlobo kodwa izixhobo zokupeyinta nge-khanyayo izinto. Lungisa, ukuba unje uluhlu apho unako zoba kuxhomekeke ixesha kwaye iqondo intimacy phezu idinga. Xa ukhangela kwi-site yethu, thina sebenzisa i cookies (kuquka Google Analytics) ukulinganisa ababukeli bomdlalo bangene nokuphuhlisa-manani ukuze ukuphucula ukusebenza kakuhle kwaye kunikela kuwe isiqulatho tailored yakho umdla.
Abafazi Lyubertsy kunye Free Dating
Het beste alternatief voor SKYPE video chat
private ividiyo Dating dating site kuba ezinzima Dating ngaphandle iifoto Chatroulette ubudala ukuhlangabezana a kubekho inkqubela omdala Dating ubhaliso free esisicwangciso-mibuzo roulette nge-girls erotic ividiyo iincoko Chatroulette ngaphandle ubhaliso omnye abafazi wishing ukuya kuhlangana nawe